Amaminerali esifundazweni saseNovosibirsk ayeningi kakhulu: kuzo zonke izindawo ezingu-83 ezifakwe ku-523 seziqashwe kakade. Lapha kukhona amalahle - nokupheka, kanye ne-high quality anthracite, kukhona amakhodi aphikisayo. Iningi le-peat, kodwa alitholakali okwamanje. Kukhona amafutha, igesi, izinsimbi ezingezona zensimbi negolide.
Kuphela kwe-anthracite yaseBrolovsky yase-Basin ihlolwe cishe ngamathani ayizigidi eziyizinkulungwane, kanti izibikezelo zithembeke nakakhulu - amathani ayizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizinkulungwane eziyisihlanu. Izitsha ezimbili ezinamakha amaDoroninsky noZavyalovsky, lapho kunamalahle amaningi futhi. Kusukela ngo-2007, amalahle aseNovosibirsk ahlolwe futhi athuthukiswe ngaphansi kwamalayisense we-OOO Best ne-OAO Region-Oil. Amaminerali esifundeni saseNovosibirsk agcinwa kakhulu futhi alindele ukuthuthukiswa kwembonini ukuqala ukukhiqizwa.
I-deposit of anthracite amalahle ku-Basin Gorlovsky yiyona kuphela eyisizinda esiyinkimbinkimbi kuzo zonke izifunda ezisempumalanga zaseRussia, ngoba le nto eluhlaza iyadingeka embonini ye-electrode. Isitshalo esikhulu kunazo zonke zaseRussia yi-NovEZ (Novosibirsk Electrode Plant). Amalahle anjalo ebhizinisi akhishwa yi-JSC "iSiberian Anthracite". Ama-deposit asele amaminerali esifundazweni saseNovosibirsk, ngokuphathelene namalahle, awasungulwa kakhulu.
Amafutha negesi yemvelo
Izinsimu eziyisikhombisa zamafutha zivuliwe ezindaweni ezisenyakatho-ntshonalanga, kodwa zithathwa ngaphandle kwenkonzo postenenno, naphezu kokuthi kunezinsiza eziningi ezimbiwa amaminerali esifundazweni saseNovosibirsk. Uhlu lwamakhokhethi:
Idiphozi eyodwa - i-Veselovskoye - i-condensate yegesi. Wonke amafutha, ahlola endaweni, aphezulu, eduze neBrent brand. Ukutholakala kwezendlalelo ezikhiqizayo kakhulu - isilinganiso samamitha amabili nengxenye isigamu. Idiphozi enkulu kakhulu iVerkh-Tarskoye, lapho kunamaphesenti angaphezu kwangu-60 kuwo wonke amafutha asesifundazweni. Kuphela okusetshenziselwa ukuxhaphazwa - i-Maloichskoye no-Verkh-Tarskoe, lapho izindawo zokulondoloza ezibekelwe khona zingamathani ayizigidi ezingaphezu kwamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye.
Isifunda saseNovosibirsk sasinenhlanhla ngezinqolobane ze-peat - zingaphezu kwamathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, kepha izindleko zokucubungula nezokucubungula ziphakeme kakhulu, ngakho-ke, ama-peat deposits azange akhuliswe, cishe kuze kube manje.
Idiphozi enkulu kakhulu yezinsimbi ezingezona zensimbi yatholwa esifundeni saseNovosibirsk, kunezigidi ezingaba ngu-1.7 million ze titanium dioxide kanye namathani ayizigidi ezingu-7.2 ezi -zirconia. Ukuhlolwa nokuthuthukiswa kwesayithi le-Filippovsky (i-Ordynsky zirkon-ilmenite placer) liyaqhubeka.
Ngokusho kwezinyathelo zezimboni, kukhona igolide elincane esifundeni saseNovosibirsk-i-deposit eyodwa kanye nezingxenye ezingamashumi amabili nane ezilinganiselwe kulinganiselwa ngamathani ayishumi nesikhombisa kuphela. Zombili izinhlobo zokufaka imali - zombili izigcawu ze-placers, kanye ne-gold bearing bearing-crusts - zifanele ukumba umgodi ovulekile. Kodwa-ke, amaminerali aphethe igolide esifundeni saseNovosibirsk awapheli amandla: ensimini kukhona igolide eliyisitshalo - i-quartz yegolide, igolide elingajwayelekile, igolide-i-polymetallic, uma sikhuluma ngezinhlobo ze-ore-formation.
Kuye kwacutshungulwa ngamathani angaba ngu-40, ngokusho kwezibikezelo enyakatho-ntshonalanga yesigodi saseSalair (isigaba se-Egorevsky isigqoko). Ukuhlaziywa kwalesi sisekelo semithombo kusikisela ukuthi cishe wonke ama-placers asebenza futhi athuthukiswa, futhi ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwezimayini zegolide kudinga ukusesha nokuhlola amasheyithi amasha, okuqinisekisiwe ukuthi kukhona. Futhi, yiqiniso, udinga ukuthuthukisa idiphozi yegolide yezinye izinhlobo zezimboni. Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi ezimayini anikezwa umsebenzi kuphela eminyakeni embalwa ezayo, amanye amathemba okusebenza ngezinto ezibonakalayo amancane kakhulu.
I-marble, i-tin, i-aluminium
I-Vysokodekorativny i-marble namanye amatshe abizayo abizayo okwenyuka kakhulu emamitha ayisishiyagalombili nesigamu square square anezimbiwa esifundeni saseNovosibirsk. Amagama ediphozi:
Petenevskoe (i-deposit best);
Shipunovskoye (ama-marble limestones);
Amasimu athuthukiswa yi- "Marble" LLC.
Kunzima ukubalula ukuthi yiziphi amaminerali esifundeni saseNovosibirsk, njengoba kukhona eziningi zazo, kodwa akuzona zonke ezokwakhiwa. Isibonelo, amabhontshi amabili amancane amancane - i-Barlakskoye no-Kolyvanskoe - amathani angamakhulu ayisithupha ngokuphelele ayabaluleki lutho: okuqukethwe okujwayelekile kuma-placers ane-casserite ane-half-gram per cubic meter. Amarekhodi e-Cadastre nawo aphethe amasheya amabili e-bauxite - u-Oktyabrskoye noNovogodnee, lapho izinqolobane zokugcina imali zingama-2068 amathani ayizinkulungwane. Izindawo zokulondolozwa kwe-aluminium kule nsimbi nazo zincane.
Usimende, ubumba, ingilazi
I-Chernorechenskoye ifaka kwisifunda se-Iskitim inezinto zokugcina izinto eziyimpahla yamasheya: amathani angu-88 900 we-limestone emkhakheni osenyakatho, amathani angu-2,013,000 we- shale emkhakheni weSlate, amathani angu-38 163 000 weklasi lokuqala lama-limestone namathani angu-223776 wesigaba sesibili engxenyeni eseningizimu. Le diphozi ithuthukiswe yi-ZAO Chernorechensky Quarry.
Ama-refractory and refractory clays atholakale emadiphini amane: uDoroginsky, u-Evsinsky noVassinsky - abaphikisayo, kanye no-Obskoy-refractory. Lapha kusebenza "i-Universal" (factory factory products). Sekucatshangelwe ukuthi kukhona amasheya amathathu esitshalo se-quartz amathani angama-8150 ayizigaba zesigaba sokuqala kanye namathani ayi-875 ayiyesibili. Ilungelo lokusebenzisa lezi zinsiza ezingaphansi kwe-LLC libizwa nge-LLC "Siberian Industrial Holding", elidlulisele leli lungelo kwi-LLC "Mineral Group".
Amapayipi ezakhiwo zokwakha ngokuvamile avame kakhulu. Esifundazweni saseNovosibirsk, ama-deposit ayishumi nesishiyagalolunye wamatshe okwakha kuphela anikezwa ukuthi, ayishumi nantathu kuwo asetshenziswa. Ukukhiqizwa ngonyaka kunamathani ayizigidi ezimbili nengxenye. Lawa yi-diabases, ama-porphyrites, ama-granite, ama-limestones nezinye idwala. I-Marble kakade ikhankanywe ngenhla, kanye nobumba. Ngokuphelele, yonke isisekelo esiluhlaza-sisekelo semaminerali yokusatshalaliswa okujwayelekile lapha kunokwanele ngezidingo zomuntu siqu nakwezindawo ezingomakhelwane. Usesho olusha lwe-geological nokuhlolisiswa kwamasayithi amasha alezi zinto eziluhlaza zihlelwe. Izakhiwo zokwakha kuphela ngeke zithuthukiswe, nakuba idiphozi zicebile. Izizathu zokuvikelwa kwemvelo, njengoba wonke amasheya ezakhiweni zesihlabathi esesigodini nasemfuleni woMfula i-Ob.
Esikhathini esifundeni kukhona imithombo enkulu yamanzi : amaminerali, amanzi ashisayo namanzi aphuma emithonjeni eyizinkulungwane eziyishumi inani elingaphezu kwesigamu sezigidi zamamitha ayizigidi zamalanga. Isikhwama sehlathi esifundeni saseNovosibirsk sithenga amahektha angu-4,490,000, kuhlanganise nezinhlobo ze-coniferous ezikhulayo endaweni engamahektha angu-977,300. Isitoko esiphezulu sezinkuni zezilwane eziyinhloko ezikhiqiza amahlathi zingaziqhenya - kulinganiselwa ku-278.8 million cubic meters.
Ixhaphozi yenkangala: incazelo, ubukhulu, indlela yokuphila, indawo yokuhlala
Highland Dagestan: imvelo, ukukhululeka, izinkinga zemvelo
Wicker kocingo ngezandla zakhe - umphelelisi ephelele noma iyiphi ingxenye
Indlela ukukhetha uju ngokuthenga emakethe noma esitolo?
Ukufakelwa phansi: amathiphu okubeka. Ukuvimbela amanzi ngaphakathi endlini enamapulangwe
Ubani ochungechungeni Gossip Girl "Gossip Girl"? Amahlazo, usongo, uphenyo
Ubani owasungula le ibhomu le-athomu? Umlando ibhomu le-athomu